Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Jimce Ah 27 May
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Jimce Ah 27 May
May 27, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Manchester United ayaa u sheegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona iyo Netherlands Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, inay dareenkooda u jeedin doonaan meel kale haddii uusan go’aansan karin inuu doonayo inuu yimaado Old Trafford xagaagan. Sport
Laacibka khadka dhexe ee Monaco Aurelien Tchouameni ayaa la soo jeediyay inuu u dhaqaaqo Real Madrid sababo la xiriira canshuur. Kooxda heysata horyaalka La Liga ayaa diyaar u ah inay ku bixiso 80m euros (£68m) 22 jirkaan heerka caalami ee dalka Faransiiska.ESPN
Manchester United , Liverpool , Arsenal iyo Chelsea ayaa dhamaantood isha ku haya Tchouameni, waxaana ay diyaar u yihiin inay soo galaan hadii uu ku biiri waayo Madrid.Sun
AC Milan ayaa dooneysa inay heshiis cusub ka saxiixato weeraryahanka Portugal Rafael Leao, oo 22 jir ah, si ay isaga diidaan xiisaha Real Madrid . Kooxda reer Spain ayaa raadineysa weeraryahan ka dib markii xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska Kylian Mbappe, oo 23 jir ah, uu mustaqbalkiisa u ballan qaaday Paris St-Germain. La Gazzetta dello Spor
Real Madrid ayaa doonaysa xiddig khadka dhexe ah iyo weeraryahan ka ciyaara xagaagan waxana ay ka wada hadli doonaan saxiixyada cusub kulanka ay Spain kaga soo laabanayaan finalka champions League ee ay sabtida la ciyaari doonaan Liverpool. Marca
Weeraryahanka Everton Richarlison, 25, ayaa laga yaabaa inuu ka tago Goodison Park xagaagan iyadoo Tottenham , Real Madrid iyo Paris St-Germain ay dhamaantood isha ku hayaan xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil. Mail
Everton ayaa kula tartameysa West Ham saxiixa weeraryahanka Burnley iyo Ivory Coast Maxwel Cornet, 25, ka dib markii Clarets ay ka hartay Premier League. Telegraph
Kabtanka Tottenham Harry Kane ayaa diyaar u ah inuu wadahadalo qandaraas cusub ah la furo kooxda, inkastoo 28 jirkaan weerarka uga ciyaara England uu riixay u dhaqaaqida Manchester City xagaagii hore. Evening Standard
Inter Milan ayaa rajeyneysa inay lasoo saxiixato Henrikh Mkhitaryan, oo 33 jir ah, marka uu qandaraaskiisa haatan ee Roma dhamaado xagaaga. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Armenia ayaa sidoo kale ka fiirsanaya dalab uga yimid kooxda ku guuleysatay Europa Conference League. Fabrizio Romano
Arsenal ayaa xiiseyneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lens Cheick Doucoure, 22. Si kastaba ha ahaatee, Brighton , Everton , Crystal Palace iyo Wolves ayaa sidoo kale isha ku haya ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Mali. Mirror
Arsenal ayaa sidoo kale ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo 25-jirka Manchester City iyo Ukraine daafaca bidix ee Oleksandr Zinchenko. Mail
Leicester City ayaa qarka u saaran inay siiso daafaca Waqooyiga Ireland Jonny Evans, oo 34 jir ah, heshiis cusub oo hal sano ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay dhageysan doonaan dalabyada u imaanaya daafaca dhexe ee Denmark Jannik Vestergaard, 29, iyo khadka dhexe ee Faransiiska Boubakary Soumare, 23, iyadoo Brendan Rodgers uu doonayo inuu ruxo kooxdiisa. Mail
Manchester United ayaa laga yaabaa inay dalab u dirto bartilmaameedka Liverpool iyo Chelsea ee Christopher Nkunku usbuuca soo socda, iyadoo 24 sanno jirkaan weerarka uga ciyaara France uu ka caga jiidayo inuu heshiis cusub u saxiixo RB Lepizig. Sky Sport Germany
Paris St-Germain ayaan la soo saxiixan doonin garabka Barcelona Ousmane Dembele, oo 25 jir ah xagaagan, inkastoo xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska si weyn loola xiriirinayo inuu ku laabanayo dalkiisa. Le Parisien